ဟယ်လို: 10 သင့်ရဲ့ smartphone ကိုအပေါ် spook ဖို့အကောင်းဆုံး app များ၏ - သတင်း Rule
ဟယ်လို: 10 သင့်ရဲ့ smartphone ကိုအပေါ် spook ဖို့အကောင်းဆုံး app များ၏
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “ဟယ်လို: 10 သင့်ရဲ့ smartphone ကိုအပေါ် spook ဖို့အကောင်းဆုံး app များ၏” စတူးဝပ်သောင်ကရေးသားခဲ့သည်, အောက်တိုဘာလ theguardian.com သောကြာနေ့ 30 ရက်နေ့များအတွက် 2015 08.14 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
အမှုအရာညဉ့်၌ဖုသွားတဲ့အခါယခုနှစ်သောအခြိနျကာလရဲ့. Spooky အမှုအရာ, သိသိသာသာ, သူတို့တစ်တွေ Candy Crush Saga အဆင့်မှာကျရှုံးသောအခါမဟုတ်ဘဲကိုယ့်ဖက် / အိမ်နီးချင်း / ကြောင်ထက်အမျက် ထွက်. ထိုအုတ်ရိုး thumping, တစ်ဦးတစ်နှစ်ပတ်လုံးအရာအရာဖြစ်ပါသည်.
ဟုတ်ကဲ့, ဟယ်လိုသရဲတစ္ဆေ၎င်း၏စစ်တပ်နှင့်အတူကဒီမှာ, စုန်း, ဝံပုလွေ, ဖုတ်ကောင်, Vampire နှင့်မိကျောင်း - အပေါင်းတို့သည်မိမိတို့မိဘများကိုနောက်ခံတောင်းပန်လှုပ်ရှားအတူချောကလက်တောင်းဆိုသင့်ရဲ့တံခါးကိုခေါက်.
သည် app များလွန်းရှိပါတယ် (ဟယ်လို, တောင်းပန်လှုပ်ရှားမ) အသငျ့တျော spooky စိတ်လှုပ်ရှားစရာရာပူဇော်သက္ကာကိုဂိမ်းများနှင့် app များ၏အကွာအဝေးနှင့်အတူ. ဒီမှာပါ 10 ထွက်ကြိုးစားနေရကျိုးနပ်.
တစ္ဆေမှန်ဘီလူး (အခမဲ့ + IAP)
သငျသညျသူတို့ထဲမှာသရဲတစ္ဆေရရှိပါသည်ကဲ့သို့သင်၏ဓါတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုကြည့်ရှုစေရန် app တစ်ခုဟာနယ်ပယ်သည်ထင်စေခြင်းငှါ,, သေးဒီတစ်ခုယခုအထိထက်ပိုမို 8 မီလီယံကြိမ် download လုပ်ထားပြီး. ဒါဟာသေသပ်စွာပြုမိရဲ့: သငျသညျနောက်ခံနှင့် filter တစ်ရွေးချယ်ရေးမှရွေးချယ်ပြီးနောက်သင်၏ကိုယ်ပိုင် mini ကိုတစ္ဆေကလစ်များသို့မဟုတ်ရိုက်ချက်များရိုက်ကူး. အခြေခံပညာ features တွေကို In-app ကိုဝယ်ယူခြင်းဖြင့်သော့ဖွင့်အခြားသူများနှင့်အခမဲ့.
Minecraft Pocket Edition ကို (£ 4.99 + IAP)
Android မှာ / iOS ကို / က Windows Phone
ဟုတ်ကဲ့ကောင်းပါပြီ, ဧကန်အမှန် ယခု Minecraft လိုသူလူတိုင်းကတယ်သိရသည်, အားလုံးပလက်ဖောင်းတစ်လျှောက်၎င်း၏ 70m ရောင်းအားပေးထား. သို့သျောလညျးပဲအမှု၌, ဟယ်လို Mojang ရဲ့အံ့သြဖွယ် sandbox 'တက်ကောက်ဖို့စုံလင်သောအချိန်ဖြစ်စေခြင်းငှါ,. မသာပါကဖုတ်ကောင်နှင့်အတူလာပါဘူး, စံအဖြစ်အရိုးစုများနှင့်ကျောချမ်းဖွယ် Endermen: ဒါကြောင့်ကိုယ့်ကိုသင့်ဇာတ်ကောင်တက် spook တစ်ခု 79p In-app ကိုဝယ်ယူအ​​ဖြစ်ဟယ်လိုဝတ်စုံအသားအရေ pack ကိုပြောသည်င်.
Minecraft: အိတ်ကပ် Edition ကို.
ဖရက်ဒီရဲ့မှာငါး Nights4(£ 2,29)
သငျသညျဖရက်ဒီရဲ့စီးရီးမှာငါး Nights အသစ်ဆိုရင်, သင်ပထမဦးဆုံးဂိမ်းနှင့်အတူစတင်အားဖြင့်သင်တို့၏လမ်းအလုပ်လုပ်ချင်စေခြင်းငှါ. စတုတ္ထနှင့်နောက်ဆုံးဂိမ်းယခုနှစ်အတွင်းထုတ်ခဲ့သည်, နှင့်ငြင်းခုံဖွယ်အကောင်းဆုံး. အားလုံးသင်ကြောက်မက်ဖွယ်-ရှာဖွေနေ animatronic ကစားစရာဆန့်ကျင်သင့်ရဲ့တစ်သိန်း pitting မြင် - အစပိုင်းတွင်သူတို့ install လုပ်ပြီးဖွင့်ဘယ်မှာဆိုင်ထဲမှာ, ဒါပေမယ့်ဒီဂိမ်းထဲမှာ, action ကိုသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အိမျလှုံ့ဆျော.
ဖရက်ဒီရဲ့မှာငါး Nights 4.
ဖုတ်ကောင်, ပွေးသှား! (အခမဲ့ + IAP)
ဒီအစိတ်အပိုင်းဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်, အစိတ်အပိုင်းပုံပြင်နှင့်အစိတ်အပိုင်းကြံ့ခိုင်ရေးပလီကေးရှင်း, ထိုသို့ app ကိုစတိုးဆိုင်အပေါ်အများဆုံးတီထွင်စိတ်ကူးများထဲကတစ်ခုဖြစ်နေဆဲ. သငျသညျအစစ်အမှန်လောကရှိအပြေးဖို့ app တစ်ခုကြောင့်ဖွင့်, အမုန္လာဥနီနှင့်အတူ (သို့မဟုတ်တုတ်) သငျသညျအပြီးလိုက်ဖမ်းဖုတ်ကောင်တစ်ဦးအလုံးအရင်းဖြစ်ခြင်း - အနည်းဆုံး, သင့်ရဲ့နားကြပ်သည်နှင့်အညီ. သို့သော်တစ်ဦးသငျ့လျြောသောဇာတ်လမ်းဝတ္ထုရေးဆရာထံမှဤနေရာတွင်လည်းရှိပါတယ် (နှင့် - ထုတ်ဖော် - ဂါးဒီးယန်းသတင်းစာပင်တိုင်ဆောင်းပါးရှင်) နောမိ Alderman စိတ်ဝင်စားသငျသညျကိုစောင့်ရှောက်ရန်. ဒီ app ကိုပြောင်းလဲခဲ့ပုံပေါ်ပိုပြီးအဘို့ဤအင်တာဗျူးကိုဖတ်ပါ.
အဆိုပါအမဲလိုက်အပိုင်း 1 (အခမဲ့)
မိုဘိုင်းသူ့ရဲ့ဘလဲစုန်းမစီမံကိန်းကိုတွေ့လိုက်ပါတယ်? အဆိုပါအမဲလိုက်ကြောင်းအခန်းကဏ္ဍကိုဖြည့်ဆည်းဖို့မျှော်လင့်တဲ့ apps များထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်: ထိုအကျဉ်းဖော်ပြချက်အဖြစ် "ကမ္ဘာ့ပထမဦးဆုံးအပြန်အလှန်ဖုတ်ကောင်ဇာတ်ကား app ကိုက" ကိုထည့်လေ့မရှိ. ဒါဟာပထမဦးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအမြင်ကနေရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးမယ့်, ရှင်သန်ရန်အလို့ငှာ၌သင်တို့ကိုအဘယ်သို့ပြုရမည်ဆုံးဖြတ်ခြင်းကိုမြင်သော. ကြောက်စိတ်များများရှိပါတယ်, နှင့်ဤပထမဦးဆုံးအစိတ်အပိုင်းတိုတောင်းနေစဉ်, ထိုသို့များအတွက်အခမဲ့ taster င် ဒုတိယ နှင့် တတိယ ဖြစ်စဉ်များ.
Toca Boo (အခမဲ့ – £ 2,68)
i.e - ဒီနေရာမှာအစဉ်အဆက်ကသူတို့အကောင်းဆုံး "woooooo" ပေးကမ်းသူတို့၏ဦးခေါင်းကိုကျော်တစ်စာရွက်နှင့်အတူ၎င်းတို့၏အိမ်တော်ပတ်လည်ပြေးသူမည်သူမဆိုများအတွက် app တစ်ခုဖွင့်. လူတိုင်း. ပြုစုသူ Toca Boca ကနေဒီသားသမီးရဲ့ app ကို Bonnie ထိန်းချုပ်ဖို့လေးတွေရရှိသွားတဲ့, ထို့နောက်ပရိဘောဂနောက်ကွယ်မှမှသူတို့ကိုမှာထွက်ခုန်မိသားစုဝင်တွေနောက်ယောင်ခံသူမ၏အိမျတျောကိုလှည့်ပတ်နေတဲ့တစ္ဆေများနှင့် Float အဖြစ်ဖွင့်ပြင်သူတစ်ဦးကလေးမလေး. ဒါဟာအလွန်ကြီးစွာသောပျော်စရာင်.
လမ်းလျှောက်နေသောအသေကောင်များ: အဘယ်သူမျှမက Man ရဲ့မြေယာ (အခမဲ့ + IAP)
အဆိုပါသစ်တစ်ခုစီးရီးများအတွက်တီဗီဖန်သားပြင်ပေါ်မှာသေပြန် Walking နှင့်အတူ, ဒီအမှတ်တံဆိပ်အသစ်ကလည်စည်း-in ကိုဂိမ်းဇာတ်လမ်းသို့မိမိတို့ကိုယ်ကိုထားအားအသစ်သောလမ်းနှင့်အတူပရိတ်သတ်များသည်. ဒါဟာတစ်ဦးကိုစုပ်ယူ roleplaying ဂိမ်းရဲ့ (RPG) တစ်ဦးအလှည့်-based တိုက်ပွဲ၏အရောအနှောများနှင့်သတိထားအသင်းစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်အတူ. အပတ်စဉ်စိန်ခေါ်မှုများလည်းလက်ရှိတီဗီရာသီကျော်လွန်ကစားသငျသညျကိုစောင့်ရှောက်ရန်ကတိပေး.
လမ်းလျှောက်နေသောအသေကောင်များ: အဘယ်သူမျှမက Man ရဲ့မြေယာ.
Deathless: အဆိုပါစီးတီးရဲ့ငတ်ခံ (£ 2,33 – £ 2,49)
ထိုအပြန်အလှန်တ္ထုအမျိုးအစားပတ်ပတ်လည်ဖြစ်ပျက်အချို့သောစိတ်ဝင်စားဖွယ်ပစ္စည်းပစ္စယရှိပါတယ် - မြင် စာအုပ်-app များ၏ဤမကြာသေးမီ roundup ဂိမ်းများဦးဆောင်အလင်းအိမ်တထုတ်ဝေသူရွေးချယ်မှုနှင့်အတူ - ဥပမာ. ဤသည်က၎င်း၏အလုပ်၏အသငျ့တျော-spooky နမူနာဖြစ်ပါသည်: မှာတော့ဖုတ်ကောင်ရှိသမျှကိုထုံးစံနှင့်အတူဆုရစာရေးဆရာမက် Gladstone အားဖြင့်တစ်ဦး 150k-စကားလုံးဝတ္ထု, အပေါ် necromantic သွားသောအခါ. သင်၏ရွေးချယ်မှုဇာတ်လမ်းမောင်းထုတ်, ဒါပေမဲ့ဒီသငျသညျကစားသလောက်ကိုဖတ်ရှုခံစားပျော်ရွှင်ပါလိမ့်မယ်အရာတစ်ခုခုသည်.
audio ကာကွယ်ရေး: ဖုတ်ကောင် Arena (£ 1.49)
Else Somethin 'အ Papa Sangre အသံသာဂိမ်းများအတွက်တာဝန်ရှိကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်, ဝေဖန်သူတို့၏နေ့ရက်ကာလ၌ iOS ကိုအပေါ်ချီးကျူ​​းခဲ့ကြရာ. audio ကာကွယ်ရေးတူညီတဲ့နည်းပညာကိုအသုံးပြု, ရွေ့လျားအားဖြင့်သူတို့ကိုပယ်တိုက်ခိုက်နေ - သင် "ဟုဒေါက်တာ Bastard ရဲ့ဖုတ်ကောင်" ၏အလယ်၌ဖမ်းမိတဲ့မျက်စိကန်းသောစစ်သည်တော်ကစားနှင့်အတူ, ပွတ်ဆွဲခြင်းနှင့်စောင်း. "ဒါဟာ Oculus ခြိုးခြံချွေတာပါင်!"ဟုဆော့ဖ်ဝဲရေးသူဆို, ဒါပေမဲ့ဒီဘာမှဒါပေမဲ့စျေးပေါဖြစ်ပါသည်.
audio ကာကွယ်ရေး: ဖုတ်ကောင် Arena.
Skullduggery! (£ 2,29)
နောက်ဆုံး, the best action game featuring “semi-organic autonomous skulls” that money can buy on the app stores. ဝနျခံရ, it’s the only one. But this isawell-crafted game blending action and puzzles, as you ping your skull throughaseries of platform levels by stretching its brain out and then letting it go. It works beautifully on the touchscreen, and while it’s not specificallyachildren’s game, my two sons (aged six and eight) enjoyed it as much as I did.
Should either of the Plants v Zombies games have lurched onto this list? What other apps deliver genuine chills and thrills? အဆိုပါမှတ်ချက်တွေအပိုင်းသင့်ရဲ့ထောက်ခံချက်အတွက်ဖွင့်သည်.
25173	0 App များ, အပိုဒ်, အကောင်းဆုံး Android apps များ, အကောင်းဆုံးက iPhone နှင့် iPad app များကို, အင်္ဂါရပ်များ, အားကစားပြိုင်ပွဲ, ဟယ်လို, မိုဘိုင်း, စမတ်ဖုန်း, စတူးဝပ်သောင်, တက်ဘလက်ကွန်ပျူတာများ, နည်းပညာ
← Samsung ရဲ့ Galaxy Tab ကို S2 ပြန်လည်သုံးသပ်: အပါးလွှာဆုံး, တစ်ဦးရင်သပ်ရှုမောဖွယ်မျက်နှာပြင်နှင့်အတူပေါ့ပါးဆုံး Tablet ကို Apple က TV ကိုပြန်လည်သုံးသပ် (2015) [VIDEO] →
Samsung ရဲ့ Galaxy S10 5G ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
သြဂုတ် 26, 2019